झापामा माओवादीले पायो प्रदेशको २ सहित ३ सिट, क्षेत्र नम्बर १ मा राम कार्की उम्मेदवार
कार्तिक १५ गते, झापा । वाम गठवन्धनमा आवद्ध माओवादी केन्द्रले झापामा तीन सिट पाएको छ । माओवादीले प्रतिनिधि सभामा एक र प्रदेश सभामा दुई सिट पाएको हो । बाँकी सबै क्षेत्र एमालेको भागमा परेको छ । वाम तालमेलअनुसार माओवादीले प्रतिनिधिसभामा झापा क्षेत्र
कार्तिक १५ गते, काठमाडौं । सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणसम्बन्धी निर्दे्शिका बनाएको तीन वर्ष बित्यो । तर, अझै कार्यान्वयनको तहमा देखिएको छैन । सुर्तीजन्य पदार्थका बट्टा र प्याकेटमा स्वास्थ्यसम्बन्धि चेतावनीमुलक चित्रले ९० प्रतिशत भाग ढाक्नुपर्ने ‘सुर्तीजन्य पदार्थ नियमन तथा नियन्त्रण निर्दे्शिका २०७१’ मा
कार्तिक १५ गते, काठमाडौं । वाम गठवन्धनमा आवद्ध एमाले र माओवादीका विधार्थी संगठनहरुले संयुक्त चुनाव प्रचार समिति गठन गरेका छन् । अनेरास्ववियु र अखिल क्रान्तिकारीको आज बागबजारमा बसेको संयुक्त बैठकले ११ हजार १ सय ११ सदस्यीय चुनाव प्रचार समिति गठन गरेको हो
महन्थ ठाकुर प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री उम्मेदवार
कार्तिक, १५ गते, काठमाडौं । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा)ले अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरलाई प्रदेश २ को मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमसँग चुनावी तालमेल गरेलगत्तै राजपाले ठाकुरलाई मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको हो
माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेल पक्राउ, सदरखोर चलान
कार्तिक १५ गते, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेल पक्राउ परेका छन् । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो सीआईबीको टोलीले ढुंगेललाई मगलबार ललितपुरको सातदोबाटोबाट पक्राउ गरेको हो । साथी भेट्न भन्दै डेराबाबाट निस्किए लगतै उनलाई साना
आचारसंहिता मिचेर वीपी क्यान्सर अस्पतालले र्गयो कर्मचारी माग
कार्तिक १४ गते, चितवन । भरतपुरको वीपी कोइराला मेमेरियल क्यान्सर अस्पतालले निर्वाचन आचारसंहिता मिच्दै विभिन्न पदहरुमा कर्मचारी भर्ना खुला गरेको छ । आचारसंहिता लागू भएपछि सरकारी निकायहरुले कर्मचारी भर्ना, नियुक्ति, सरुवा–बढुवा जस्ता निर्णय गर्न नपाउने र गर्नैपर्ने भएमा आयोगको स्वीकृति लिएर गर्नुपर्ने
आरजुबिरुद्ध नारदमुनिलाई उठाउने एमालेको निर्णय, प्रदेश सातका २३ उम्मेदवार छानिए
कार्तिक १४ गते, काठमाडौँ । दोस्रो चरणमा मंसिर २१ गते चुनाव हुने प्रदेश नम्बर ७ का ४ जिल्लामा नेकपा एमालेले आफ्ना उम्मेदवार टुंगो लगाएको छ । वाम गठबन्धनको सिट बाँडफाँट अनुसार आफूले पाएका क्षेत्रहरुमा एमालेले उम्मेदवार टुंगो लगाएको हो । माओवादीसँगको बाँडफाँटमा
आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्का मन्त्रालय तानिए
कार्तिक १३ गते, काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्का आपूर्ति मन्त्रालय तानिएका छन् । सोमबार आपूर्तिमन्त्री जयन्त चन्दले खड्कालाई मन्त्रालय तान्ने निर्णय गरेका हुन् । उनलाई मन्त्रालयमा हाजिर गराउन औपचारिक पत्रसमेत पठाइसकिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता मुकुन्द पौडेलले जानकारी दिए । इन्धन
आरजु देउवा कैलाली ५ मा चुनाव लड्ने
कार्तिक १३ गते, काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसकी नेतृ आरजु राणा देउवा प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने भएकी छन् । सोमबार बसेको कांग्रेस संसदीय समितिको बैठकले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजुलाई कैलाली ५ मा उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको हो । दोस्रो संविधानसभामा प्रधानमन्त्री
प्रचण्डलाई चितवनमा विक्रम पाण्डेको चुनौती, एमालेसँग गठवन्धनपछि प्रचण्ड कति सुरक्षित ?
सुवास पण्डित कार्तिक १३ गते, चितवन । वाम गठवन्धनका तर्फबाट चितवन ३ मा उम्मेदवारी दिने तयारीमा रहेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डविरुद्ध राप्रपा ( प्रजातान्त्रिक ) का उपाध्यक्ष एवं वनमन्त्री विक्रम पाण्डे चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रने भएका छन् । मन्त्री पाण्डे हलो चिन्ह लिएर कांग्रेसको सर्मथनमा
चुनावी परिणामले एमालेसँगको एकता भाँडिदैनः प्रचण्ड
कार्तिक १३ गते, चितवन । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आगामी निर्वाचनको परिणामले एमालेसँगको पार्टी एकतामा कुनै असर नगर्ने प्रष्ट पारेका छन् । भरतपुरमा प्रेस चौतारी र प्रेस सेन्टर चितवनले गरेको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी एकता संयोजन समिति समेत
उद्योगपति विनोद चौधरी एमाले छाडेर कांग्रेसमा
कार्तिक १३ गते, पोखरा । उद्योगपति विनोद चौधरीको नाम नेपाली कांग्रेसको समानुपातिक तर्फको बन्दसूचिमा समावेश भएको छ । चौधरी यसअघि २०६४ सालको संविधानसभा चुनावमा नेकपा एमालेबाट समानुपातिकतर्फको सांसद हुनुहुन्थ्यो । एमालेभित्र माधव नेपाल निकट रहनुभएका उहाँ केपी ओली शक्तिमा आएसँगै छाँयामा पर्नुभएको
झापामा सिटौलाले मारे बाजी, कांग्रेससँग राप्रपाको खटपट !
कार्तिक १३ गते, झापा । राप्रपा र नेपाली कांग्रेसको चुनावी तालमेलका लागि प्रतिष्ठाको बिषय बनेको झापा क्षेत्र नम्बर ३ नेपाली कांग्रेसले नै पाउने भएको छ । कांग्रेसका प्रभावशाली नेता कृष्ण सिटौला सो क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभातर्फ प्रत्यक्ष उम्मेदवार बन्ने पक्का पक्की भएको छ । कांग्रेससँगको
त्रिशुली नदीमा यात्रु बस खस्दा ३१ जनाको मृत्यु,२९ जनाको सनाखत
कार्तिक १२ गते,सप्तरी । धादिङको गजुरी गाउँपालिका वडा नम्बर ५ घाटबेँसीको बाङ्गेबाट शनिबार बिहान त्रिशुली नदीमा यात्रु बस खस्दा ३१ जनाको ज्यान गएको छ । ज्यान जाने २९ जनाको सनाखत भएको छ । दुर्घटनामा १५ जना घाइते भएका छन् । ईलाका
कार्तिक ११ गते, काठमाडौं । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई गाडी उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयसँग ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ माग गरेको छ ।मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई स्रोत साधनसम्पन्न बनाउने कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक स्थानीय तहमा सवारीसाधन उपलब्ध गराउन ७ सय
त्रिशूली नदीमा खसेको बसबाट १५ जनाको उद्धार, ४० जना हराएको अनुमान
कार्तिक ११ गते, धादिङ । धादिङको गजुरी नजिकै एउटा यात्रुबस त्रिशूली नदीमा खसेको छ । सप्तरीको राजविराजबाट काठमाडौंका लागि छुटेको ना ६ ख १४ ६७ नम्बर बस गजुरी नजिकै पोखरी खोला भन्ने ठाउँबाट त्रिशूलीमा खसेको प्रहरीले जनाएको छ । बस नदीमा
चुनाव तोकिएकै मितिमा, समानुपातिक मतपत्र छापियो, प्रत्यक्षको आजबाटै सुरु ः प्रमुख निर्वाचन आयुक्त
कार्तिक १० गते, काठमाडौं । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले मतपत्रको बारेमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशलाई सम्मान गर्दै निर्वाचन पूर्व्निर्धा्रित कार्यक्रमअनुसार नै अघि बढ्ने बताउनुभएको छ । आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावका लागि शुक्रबार आयोजित निर्वाचन र सुरक्षा विषयक दुई दिने
इलाममा १७ मतदान केन्द्र थपिए
कार्तिक १० गते,इलाम । आउदो मंसिर २१ मा हुन लागेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्य चुनावका लागि इलाममा १७ वटा मतदान केन्द्र थपिएका छन् । १ सय ४४ मतदान स्थलमा १७ वटा मतदान केन्द्र थप गरिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ
दोलखामा १२ मतदान केन्द्र थपियो
कार्तिक १० गते,दोलखा । प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा चुनावका लागि दोलखामा १२ मतदान केन्द्र थपिएको छ । मतदाताको संख्या बढेसँगै जिल्लामा १२ मतदान केन्द्र थप गरिएको हो । स्थानीय तह चुनावका लागि जिल्लामा एक सय ७८ मतदान केन्द्र रहेकामा अहिले एक सय
नागरिक अभिनन्दनका लागि राष्ट्रपति फुङलिङमा
कार्तिक १० गते,ताप्लेजुङ । स्वर्गीय पति मदन भण्डारीको जन्मस्थलमा गरिने नागरिक अभिनन्दनका लागि राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारी शुक्रबार बिहान ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङ आइपुग्नुभएको छ । राष्ट्रपति भण्डारी शुक्रबार बिहान नेपाली सेनाको नयाँ रणभीम गुल्ममा अवतरण हुनुभएको हो । उहाँलाई त्यहाँ फुङलिङ नगरपालिकाका मेयर